वियतनामी Pho बनाउन सही तरिका सडकको लागि एक युगल
वियतनामी बीफ Pho बनाउन सही तरिका
यो एक व्यञ्जन हो जुन सम्पूर्ण विश्व को बाहिर पुरा तरिकाले जान्दछ जुन केहि भित्र एक फीड को लागी जान्छ। यो राम्रो कारण संग फैशनी हो - यो धेरै राम्रो छ। तर, सजिलो बनाउन र गृहमा सजिलो छ?
त्यती धेरै होइन।
वास्तविक एफओ - एक भियतनामी डिशले बीफ, ट्युन्स, र विभिन्न "अफ" कटौतीमा प्रोटीनलाई ध्यान दिंदै, स्पष्ट निर्देशनहरूसँग सही ढंगले बनाउन र स्पष्ट निर्देशन दिन्छ। यो नुस्खा उपयुक्त छ, स्पष्ट छ, र केहि चीज तपाईं घर मा मूल अवयव संग, या तपाईंको किराने को दोकान मा खींच सकते हो। मानक बजारमा उपलब्ध छैन जुन एशियाई विशेषता भण्डारमा फेला पार्न सकिन्छ।
यदि तपाईंसँग केहि नयाँ, केहि मजाक बनाउनको लागी एक साँचो जुनसुकै छ, यो तपाईंको समयमा समयको अन्तमा बनाउनको लागी राम्रो पकवान हो। साथै, यसको लागि अन्तिम हुनेछays!
यो डिश प्रयास गर्नुहोस्, र हामीलाई थाहा छ कि तपाईंको लागि कसरी काम गर्दछ!
वियतनामी बीफ Phò
पाठ्यक्रम: मुख्य मार्ग
1 6- औंस बेकार पट्टी स्टिक वा बीफ टेंडरलोन बोसोको टुक्रा
½ पाउन्ड 85% lean ground beef
1 प्याज को माध्यम ले जम्मा अन्त को माध्यम ले
6 कपहरु कम सोडियम बीफ श्वेत
¼ कप माछा सस प्लसिंग को लागि अतिरिक्त
1 2- इन्च टुक्रा टुक्रा अनपिल र पतली राउन्डमा कटायो
1 tablespoon चीनी प्लसिंग को लागि अतिरिक्त
3 तारा एनिड पोड
3 सम्पूर्ण लौह
1 चम्मच नमक थप आवश्यक भएमा
½ चम्मच काली मिर्च
4 औंस (⅛ "विधवा नूडल्स
2 tablespoons कटा ताजा cilantro
2 घोडाहरू कडा सानो
¼ कप सेम फुर्ती
¼ कप ताजा थाई वा इटालियन तुलसी पातहरू
2 limes 8 किनाराहरूमा प्रत्येक कटौती
नरम एक्सएनएनएक्सएक्समा भुइँमा हावा तोड्नुहोस् "रङ र मध्यम गर्मीमा ठूलो बर्तनमा ड्रप गर्नुहोस्।
सबै पक्षमा ब्राउन, त्यसपछि 1 द्वारा पानी थप्न थप गर्नुहोस् "र उच्च गर्मीमा एक फोडा मिश्रण।
2 मिनेटको लागि फोहोर, एक पटक वा दुई चोटि सुन्नुहोस्।
कलरानमा मस्तिष्कको मासुको मासु, त्यसपछि बत्तीमा बीफ फर्काउनुहोस्।
जमीन मा बीफ संग बर्तन मा3प्याज चौथाई रखें। बाँकी प्याज तिमाहीको पतले सम्भव भए र गार्निशको लागि सेट गर्नुहोस्।
ब्रथ, 1 कप पानी, माछा चटनी, अदरक, दालचीनी, चिनी, तारा एनि, लौंग, 1 चम्मच नुन, र मिर्चेरकसहरू पोष्ट गर्न र उच्च गर्मीमा फोडा ल्याउँदछ।
45 मिनेटको लागि आंशिक रूपमा कवर गरिएको मध्यम-मध्यममा तापक्रम घटाउनुहोस्।
शोर सिम्मर हुँदा, ठूलो प्लेटमा स्टेक राख्नुहोस् र धेरै फर्म सम्म स्थिर रहनुहोस्, 35 बाट 45 मिनेट। एकपटक फर्म, वोसोको कडा घाउहरू टाँस्नुहोस् र अनाजको टुप्पो काट गर्नुहोस् ⅛ "मोटो स्लाइसमा।
प्लेटमा स्टेक फर्काउनुहोस् र सेवा गर्नु अघि कोठाको कोठामा आउनुहोस्।
कलररको माध्यमबाट ठूलो कटोरामा राख्नुहोस्। ह्यामबर्गर बन्दुकहरू रिजर्भ गर्दै, ठिक पार्नुहोस्।
राम्रो जाल स्ट्रिटरको माध्यमबाट तनाव ब्रेकले पनीर र सिजनमा थप चिनो र नुनको साथ तिर्खा मोटोपनको साथमा राखिएको हुन्छ (शरद ऋतु ओभर-स्वादको स्वाद हुनुपर्छ)।
आवरण र कम तापक्रममा न्यानो राख्नुहोस्।
खाना खाने को लागी तयार हुँदा, मध्यम आकारको कन्टेनरमा नोडल राख्नुहोस् र वास्तवमै तातो पानीको पानीले ढाक्नुहोस्।
नूडल्सहरू प्लिबल योग्य नहुँदा, 10 15 मिनेटसम्म; नाली नूडल्स।
बीचमा,2क्वार्ट्स पानी ल्याउन अर्को ठूलो बर्तनमा फोडा गर्न। नूडल्स निकास गर्नुहोस्, उबलते पानीमा थप्नुहोस् र लगभग निविदा नभएसम्म 30 सम्म 60 सेकेन्ड सम्म पकाउनुहोस्।
तुरुन्तै नाली र दुई कटोरा बीचको नूडल विभाजित गर्नुहोस्।
श्वेतलाई उच्च गर्मीमा रोलिङ फोडामा ल्याउनुहोस्।
कच्चा स्टिक स्लाइस र व्यक्तिगत कटोराको बीचमा भुइँमा खसेको मासुको टुक्रा विभाजित गर्नुहोस्, नूडल्सको शीर्षमा स्लाइसहरू हिसाब गर्दै।
स्टेक स्लाइसको शीर्षमा पाइल आरक्षित प्याज स्लाइसहरू र सिलिलाउ र स्केलियनसँग छिटो।
प्रत्येक कटोरामा पातलो तातो शरद सिधै भरिएको माटोको रूपमा लिनुहोस्।
बिन मुर्दा, तुलसी पातहरू र भेटी भेडाहरू संग गार्निश।
होईसिन, श्रीराचा, र अतिरिक्त माछा चट्या संग तुरुन्तै सेवा गर्नुहोस्।
श्रेणी: एशिया, खाद्य र पेय, मुख्य मार्ग, व्यञ्जनहरु, सुप, भियतनाम, भियतनामी टैग: खाना, फो, व्यञ्जनहरु, भियतनाम, भियतनामी
← यॉर्कशायर पडिंग
Airwander.com को समीक्षा →